Saameynta qaraxyada lala beegsado shacabka ku leedahay bulshada
How pointless Al-Shabaab attacks are affecting livelihoods - Friday, 08 January 2021 08:02
Saameynta qaraxyada lala beegsado shacabka ku leedahay bulshada - Friday, 08 January 2021 08:18
Daacish oo iyaga dhexdooda is laayeen - Friday, 08 January 2021 07:54
Daesh Somalia in turmoil as it breaks up into two factions - Friday, 08 January 2021 07:59
Key analysts agree al-Shabaab is on a steady decline - Tuesday, 01 December 2020 09:42
Waxaa hal sano laga joogaa qaraxii ay kooxda dhiig-cabtada ah ee al-Shabaab ay la beegsatay shacabka Soomaaliyeed ee 28-dii bisha Diseemba sanadkii tagay ka dhacay isgoyska ex-control Afgooye halkaasoo ay ku xasuuqeen ku dhawaad boqol qof oo ka mid ahaa shacabka Soomaaliyeed.
Marka laga tago tiiraanyada iyo murugta ay leedahay weerarrada ururka dilaaga ah ee al-Shabaab geysto, waxaa dhimashada shacabka maaddaama laga yaabo in qofka qaraxa ku dhintay ahaa mid qoyskiisa masruufayay ay sababeysaa in kharashka nolol-maalmeedka la waayo. Ummadda Soomaaliyeed oo iyaguba la liicaya nolol-maalmeedkooda ayaa haddana waxaa qaraxyada noocaan ah ku shahiidaa qofkii masruufayay qoyska.
Tusaale ahaan, Cabdiraxiin Axmed Yalaxow wuxuu ka mid ahaa dadkii lagu xasuuqay qaraxa ka dhacay isgoyska ex-control Afgooye, wuxuuna ahaa wiil dhallinyaro ah oo agoon ahaa oo hooyadiis ka caawin jiray masruufka qoyska. Dhimashadiisana waxay sababtay in hooyadiisa ay nolol-maalmeedka ku rafaaddo.
In kastoo uu Cabdiraxiin ahaa ardey, haddana wuxuu maalin walba qoyskiisa u sahli jiray inay quutaan isagoo maareynayay nolosha gurigooda.
Maryan Macalin oo ah hooyada Cabdiraxiin ayaa sheegtay in wiilkeeda uu ahaa agoon oo aabbahiisa mar horay geeriyooday iyo in kaalin muhiim ah oo ka qaadanayay gurigooda.
“Wiilkeyga xillina iskoolka ayuu dhiganayay xillina qeyb muhiim ah ayuu ka qaadanayay nolol-maalmeeedkeenna, 22 sano ayuuna jiray,” ayey tiri hooyo Maryan.
Ururka dilaaga ah ee al-Shabaab wuxuu had iyo jeerba sababaa musiibo qaran iyadoo shacabka qaraxyada ay geystaan Shabaab. Geerida kumannaanka qof ee mar walba ku dhammaandaan weerarrada al-Shabaab waxay saameyn weyn ku reebtaa nolosha dadka ay ka tagaan.
Waxaa shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay iska dhiciyaan cadowga keliya ee maanta hortaagan horumarkooda iyo guud ahaan hor-u-socodka noloshooda.